Hawaii - Karazan-javamaniry manafika | Fiaretana haran-dranomasina
Hawaii - Karazan-javamaniry manafika
Manangana ny harambato fisamborana amin'ny alàlan'ny fanafihana fanafihana famonoana sy ny urchin biocontrol ao Kāne'ohe Bay
Kāne'ohe Bay dia eo ambanin'ny sarin'ny tendrombohitr'i Ko'olau eo amin'ny lafiny rivodoza O'ahu. Io no ranomamy lehibe indrindra any amin'ireo nosin'i Hawai'ian renivohitra, ary voahodidin'ny rano sy ranom-boasary maro. Izy io no hany tokana ao Hawai'i, izay ahitana vatohara mena, harambato fisaka, ary harambato. Manana lanjany ara-kolontsaina sy ara-tontolo iainana izy io, ary efa ela dia loharanom-bola manan-karena amin'ny fampiasana ara-barotra, fialamboly ary fialan-tsasatra. Ny banga dia manana olona mihoatra ny 40,000 mipetraka eo akaikin'ny moron-dranony na any an-tendrombohitra ambonin'izany, ary koa ny tobin'ny tafika an-dranomasina amerikana, ny University of Hawai'i Institute of Marine Biology ao Moku o Lo'e (Coconut Island) poketrany ho an'ny daholobe izay manome alalana isan'andro ho an'ireo mpizaha tany sy mpanjono an-jatony.
Ny algare mitranga dia miteraka fandrahonana goavana ho an'ny tontolo iainana manodidina ny haran-dranomasina any Hawai'i. Any amin'ny tontolo an-dranomasina izay efa atahorana ny fahalotoan'ny tany sy ny fitrandrahana, dia afaka misambotra mora foana ary manipy vato hipoitra. Indrisy fa ny vatohara any Kāne'ohe Bay dia mijaly noho ny alahelon'ny alg amin'ny famandrihana izay mameno matevina. Gracilaria salicornia (gorilla ogo) ary Kappaphycus / Eucheuma spp. (alemàna mikorontana) no nampidirina tao amin'ny biraon'ny tetikasa momba ny fambolena tany am-piandohan'ny 1970. Ireo ala mitombo haingana dia niely nanerana ny valan-javaboahary rehetra izay nahitan'izy ireo ny alahelon'ireo teratany, nifoka sy namono ny haran-dranomasina, mandrakitra ny toeram-ponenan'ny trondro tany an-toerana, nanakana ireo vatohara vaovao tsy hikasika ny vatohara, ary ny fampihenana ny fahasalamana sy ny biodiversité amin'ny ankapobeny. Soa ihany fa, ireo teratany an-dranomasina (Tripneustes gratilla) tahaka ny mihinana azy, fa ny mponina ao aminy kosa dia mihitsoka ao anaty ala.
Raha tsy misy na inona na inona atao mba hampitsaharana ny fielezan'ny algine mitrandraka, dia mbola hanohy mianavaratra miankandrefana izy, miparitaka eny amin'ny moron-dranomasina any amin'ny morontsirak'i O'ahu sisa.
Mba hamerenana ny haran-dranomasina Kāne'ohe Bay sy ny fisorohana ny fielezan'ny alika hafa, ny State of Hawai'i's Resources for Water Resources (DAR), miara-miasa amin'ny The Nature Conservancy (TNC) sy ny University of Hawai'i (UH) , dia niasa tamin'ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny ho an'ny roa tonta mba hifehezana ny algan'ny invasive amin'ny:
Manala ireo alain'ny alika mba hamela ny haran-dranomasina sy ny toeram-ponenan'ny trondro
Atsaharo ny akorabato mitambolimbolan-tany izay mihinana ireo algônan'ny alikaola ary mitazàny azy tsy hiverina
DAR, TNC, ary UH no namolavola voalohany misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSuper Sucker barge in 2005 mba "hitsentsitra" algasy mitentina. Ny Super Sucker dia kapoaka fanondrahana ao anaty sambofiara misy hosoka izay ampiasain'ireo mpamafy mba hampidinana ny alg amin'ny ala. Ireo fanafody ireo dia atolotra amin'ny tantsaha eo an-toerana izay mampiasa izany ho an'ny compost.
Ny divay mampiasa ny Super Sucker mba hanesorana alika mitentina. © Hawai'i DLNR
Ny Super Sucker dia afaka manala na aiza na aiza amin'ny 600-1,000 kilao (270-450 kilograma) algoma isan'ora arakaraka ny toerana sy ny fepetra. Tamin'ny taon-dasa, ny TNC dia nanamboatra Super Sucker faharoa sy mini-sucker kely nampiasaina tamin'ny rano mangatsiaka, mba hanamaivanana ny fandidiana.
Ranomasimbe Urchin Biocontrol
Na dia mahomby aza ny Super Sucker amin'ny fanesorana ny ankamaroan'ny algan'ny invasive, ny alka dia afaka hiverina ao anatin'ny enim-bolana raha tsy misy na inona na inona natao hanakana azy. Mba hisorohana ny ala tsy hivoatra, ny DAR dia misahana ny fametavetana amoron-dranomasina any amin'ny Foiben'ny Fikarohana momba ny Fanjono. Ireo tompon-tany "mpanjono samihafa" dia indray mandeha monja tao Kāne'ohe Bay, saingy nihena ny isan'ny mponina tao anatin'ny folo taona farany.
Nahomby ny fanjakana T. gratilla Avy amin'ny dabilio lavalava manerana ny lalana mankany amin'ny olon-dehibe. Ny fametahana dia mamokatra arina 5,000 eo ho eo isam-bolana, ary miasa izy ireo mba hampitombo io isa io hanatsara hatrany ny fatran'ny fanafody fanodinana alga. Ny arina dia mivadika mivantana eo amin'ny vatohara mba hihinam-boa rehefa nesorin'ny Super Sucker ny ankamaroan'ny ala mitentina. Satria tsy hiampita ny sisin-dranomasina eo anelanelan'ny vatohara ireo valala, dia azo inoana fa hijanona izy ireo; Afaka angonina indray koa izy ireo ary hifindra any amin'ny vatoharan-dranomasina hafa raha ilaina izany.
Ny jiro mpanangom-bokatra izay nipoitra tamin'ny vatohara. © Hawai'i DLNR
Ny fikojakojana ny akorabato misy ala mitentina dia manokatra sehatra vaovao ho an'ny mpitrandraka haran-dranomasina sy alan-tany, ary manampy amin'ny famerenana ny toeram-ponenana voajanahary ho an'ny trondro sy ny zavaboary an-dranomasina hafa, mahatonga an'i Kāne'ohe Bay ho matanjaka kokoa amin'ny fandrahonana ho avy.
Hatramin'ny oktobra 2012, ny ekipa TNC / DAR izay efa voatendry dia nanaisotra ny ala 250,000 (114,000 kilograma) amin'ny algan'ny invasive avy amin'ny harambato 20 (hektara 8). Ny alaina dia omena ireo tantsaha ao an-toerana ho an'ny compost.
Hatramin'ny volana aogositra 2013, nanamarika andian-dahatsoratra lehibe ny ekipa: ny totalin'ny karazana 100,000 avy amin'ny fametavetana Anuenue dia nafindra tany amin'ny vatohara. Natao ny fikarohana mba hamaritana ny hasarobidin'ny karazam-borona ilaina ao anatin'ny acre mba hitazonana ny algôma amin'ny fanamarinana. Ary mitohy ny fanarahamaso eny an-tsaha amin'ny alàlan'ny lantom-pokonolona, ​​ny fifehezan'ny vatohara, ny fandraisana mpiasa ary ny fahasamihafana sy ny fahasamihafana.
Manomàna ny fanadiovana ny sambo rehetra, ny fanjonoana ary ny fiaramanidina mba hisorohana ny fielezan'ny karazan-javamaniry any amin'ny faritra vaovao.
Amporisiho ireo mpanarato ao an-toerana haka izay ilainy. Avelao ny trondro voangony sy ny arisin-dranomasina any an-dranomasina mba hihinana ireo ala mpirenireny sy ny fiainana an-dranomasina hafa mba hamokarana sy hamenoana ilay banana.
Miaraha miasa amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana mba hitazona ny rano fanadiovana madio - hanabe ny mponina mikasika ny fanadiovana sy ny fikojakojana ny tany ary ny fomba hafa hampihenana ny fandoavana ny fandotoana sy ny fiterahana ao anatin'ilay ala.
Amporisiho ny vahoaka hanolo-tena amin'ny fikambanan'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana izay miasa mba hamerenana ny renirano, ny ala, ny trondro ary ny tanimbolim-panjakana any an'ala.
Nandritra ny telo taona lasa, ny sambondanitra Super Sucker sy ny fametavetana amin'ny felam-boninkazo dia navoaka tamin'ny alalàn'ny Vaomieran'ny Karazam-borona Hawai'i Invasive, ankoatra ny volavola federaly avy amin'ny Fitondram-panjakana National Oceanic and Atmospheric. Ny famatsiam-bola ihany koa dia loharanon'ny fanohanana ankehitriny sy ho avy.
Ny Nature Conservancy dia nanolo-tena hampakatra $ 2.5 tapitrisa (US) handoavana ny fananganana ny Super Sucker vaovao sy ny telo taona niasana.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHawai'i Department of Land and Resources Resources, Division of Water Resources
Hawai'i Council of Species Invasive
Kànneo Canoe Club
Fitantanam-pirenena sy ny atmosfera
University of Hawai'i Institute of Biosciences
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoWebinar momba ny zaridaina haran-dranomasina - famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina: tombontsoa amin'ny fanesorana algoma manafika any Hawai'i
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHawai'i Council of Species Invasive
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMiaro ny haran-dranon'i Hawai'i amin'ny alan-dranomandry, any amin'ny Hawai'i Department of Land and Resources Resources
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy kolontsaina avy amin'ny tompon-tany tompon-tany dia toy ny safidy biocontrol ho an'ny algera alg
Drafitra fitantanana karazan-javaboary an-tsokosoko hawaià, fizarazaran'ny loharanon-drano anaty rano ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPDF)
Afisy Invagive an'ny Hawai'i, fizarazaran'ny harena anaty rano ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPDF)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFihavaozana ny Reef, ny Nature Conservancy
manokatra fisie XML
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFialamboly Rivotra: Fanentanana Hanavotana an'i Kāne'ohe Bay, Ny Fiarovana ny Zavakanto